Galguduud oo laga dareemayo diyaar garow Maamul – Radio Muqdisho
Galguduud oo laga dareemayo diyaar garow Maamul
Gobolka Galguduud waxaa ka soconaya diyaar garow iyo olele ku aaddan shirka maamulka loo sameyn doono gobollada Mudug iyo Galguduud oo dhawaan halkaas lagu qaban doono.
Musharraxiin iyo masuuliyiin ayaa ku qulqulaya magaalooyinka gobolka, ayadoo dhismeyaal badan ay ka soconayaan degmada Dhuusamareeb oo la filayo in shirku uu ka dhaco.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale “Qeybdiid” ayaa maalmahaan booqasho ku maraya magaalooyinka gobolka, wuxuu shalay gaaray degmada Guriceel kaddib markii uu horay u booqday Cadaado iyo Dhuusamereeb oo Galguduud ka wada tirsan.
Dhowr musharrax oo kale ayaa ku sugan gobolka, kuwaas oo olole ugu jira sidii ay u hoggaamin lahaayeen maamulka gobollada Dhexe ee la dhisi doono.
Wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan Radio Muqdisho ayaa ku soo warramaya in dadka degaanku ay aad u hadal hayaan maamulka la sameyn doono, ayadoo masuuliyiin ka tirsan dowladda oo ku sugan Dhuusamareeb ay kulamo la leeyihiin qeybaha bulshada.
Dibadbaxyo ka dhan ah masjid la gubay oo ka dhacay Sweden